एमालेका अन्तिम केपी ! - परिहास - नेपाल
एमालेका अन्तिम केपी !
चुनावअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कटाक्ष गरेका थिए– देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री । वाम गठबन्धनपछि चुनावी परिणामले त्यस्तै देखायो । कांग्रेस बेस्सरी बढारियो । देउवाले सिंहदरबार छाडे, उनको ठाउँमा आए ओली । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतामा हस्ताक्षर भइसक्यो । दुवै पार्टीको पुच्छर हटाउने अभूतपूर्व सफलतापश्चात् नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को लालपुर्जा नै हड्पियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । नवजात नेकपाको अध्यक्ष नै जुम्ल्याहा हुने भए । अब न एमाले रहने भयो, न त माओवादी केन्द्र । देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्छन्, हुँदैनन् दैव जाने ! बरु, ओलीचाहिँ ‘एमालेका अन्तिम प्रधानमन्त्री’ हुने पक्का भयो । आफ्नै बोलीको गोली लाग्ने गरी कस्तो अशुभ बोलेछन् ओलीले ?